केवल तथ्यहरू: चिन्ता - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
केवल तथ्यहरू: चिन्ता
समय समयमा हामी सबै चिन्तित हुन्छौं। त्यो सामान्य हो। तर कहिलेकाँहि चिन्ताले हाम्रो जीवन लिन सक्दछ र हामी डराउँछौं वा डराउँछौं। चिन्ता वास्तवमा एक सबैभन्दा साधारण स्वास्थ्य विकार हो जुन अमेरिकामा प्रत्येक the वयस्क मध्ये १ मध्ये १ लाई असर गर्दछ
जब हामी गाह्रो परीक्षा लिन्छौं वा समूहको अगाडि बोल्छौं हामी प्राय अलि चिन्तित महसुस गर्न सक्छौं। जब हामी सामान्य प्रतिक्रिया गर्दैछौं, यो अस्थायी अनुभूति हुन्छ। जब हामी अझै तनाव समाप्त भए पछि डर वा त्रास महसुस गर्दछौं, वा हामी सामान्य त्रास महसुस गर्दछौं जुन टाढा जान सक्दैन, वा यो समय बित्दै जाँदा खराब हुन्छ र यसले हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरूलाई असर गर्छ, तब जब खास उपचार पाउने सिफारिस गरिन्छ।
चिन्ताको कारण के हो?
त्यहाँ कुनै एकल कारण छैन, तर सामान्यतया यो एक दर्दनाक घटना द्वारा ट्रिगर गर्न सकिन्छ। यो एक डरलाग्दो अनुभवबाट आउन सक्छ जसले हामीलाई कमजोर, असुरक्षित वा असुरक्षित महसुस गर्यो। कहिलेकाँही यो शरीर वा हाम्रो दिमागमा रासायनिक असंतुलनको कारणले हुन्छ। पदार्थ दुर्व्यवहारको कारण चिन्ता हुन सक्छ। त्यहाँ चिन्ताको धेरै प्रकार हुन्छन् जुन जीवनमा धेरै चीजहरूको सामान्य डरदेखि लिएर एकदमै खास फोबियाहरूमा हुन्छ जुन निश्चित अवस्थाले सुरु गर्दछ।
छोटो अवधिमा, उन्नत सतर्कता, तनाव वा चिन्ताको कारण हुने परिस्थितिहरूले हामीलाई गम्भीर चुनौती वा खतरनाक अवस्थाबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। एड्रेनालिनमा लात हान्दा हामीलाई सार्न वा चाँडो प्रतिक्रिया दिन र हानिबाट जोगिन सक्छ।
जे होस्, यदि यो जारी रहन्छ भने यसले दुबै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक क्षति गर्न सक्छ र सामान्य जीवनसँग व्यवहार गर्न हामीलाई कतै कम सक्षम बनाउँदछ।
चिन्ताको लक्षण के हो?
चिन्ताका लक्षणहरू पर्याप्त फराकिलो हुन्छन्। तिनीहरू समय-समयमा हामीसँग व्यवहार गर्ने केहि मुद्दाहरूको रूपमा हेर्न सक्छन्। ती संकेतहरू पनि हुन सक्दछन् यदि हामीले ध्यान दिन आवश्यक परेको खण्डमा तिनीहरू प्राय: हुन्छन् र हामी तिनीहरूलाई हिलाउँदैनौं।
तिनीहरूले समावेश गर्न सक्छन्:
चक्कर आउने र लाइटहेडनेस
भोक मा परिवर्तन
आसन्न डूम को भावनाहरु
आतंक वा स्नायुपन, विशेष गरी सामाजिक सेटिंग्स मा
कठिनाइ एकाग्रता र बेचैनी
आफैलाई वा अरूलाई हानी गर्ने बारे विचारहरू
कसरी चिन्ताको उपचार गर्न सकिन्छ?
एक विशिष्ट मूल्यांकन र उपचार योजनाको साथ, चिन्ताले अक्सर उपचारमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छ। उपचार विकल्पहरूमा प्राकृतिक विधिहरू समावेश छन्:
एक उत्तम बढी सन्तुलित आहार खाने
क्याफिन र मदिरा सीमित गर्दै
थप आरामदायी निन्द्रा प्राप्त गर्दै
ध्यान वा प्रार्थना
के ट्रिगर चिन्तालाई फरक जवाफ दिन सिक्दै
अभ्यास नियन्त्रण गरिएको, पछाडि नियन्त्रण प्राप्त गर्न गहिरो सास फेर्न
कुराकानी गर्दै परिस्थितिहरू जुन ट्रिगर चिन्ता
केहि अवस्थाहरूमा, उपचारले पनि वा वैकल्पिक रूपमा समावेश गर्दछ:
गहन थेरापी सहित विशेष ट्रामा थेरापी
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि सामान्यतया चिन्ता एक रातको मात्र हुदैन, त्यसैले उपचार पूर्ण रूपमा काम गर्न केही समय लिन सक्दछ। यसले बाटोको साथ केही समायोजन लिन पनि सक्दछ जुन कुन उपचारहरू सबैभन्दा प्रभावकारी छन्। केही व्यक्तिको लागि लक्षणहरू चाँडै सुधार भएपछि उपचार सुरु हुन्छ, जबकि यो अरूहरूको लागि लामो यात्रा हो।
परिवारका एक सदस्य वा मित्रलाई समर्थन गरी चिन्ता छ
चिन्तित कसैलाई सहयोग गर्नु चुनौती हुन सक्छ। तपाईं पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्न कि किन तिनीहरू त्यस्तो महसुस गरिरहेका छन्, र तपाईं के गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि, तपाईंले प्रदान गर्न सक्ने एक उत्कृष्ट भूमिका स्थिर, बिरामी, निरन्तर समर्थन हो। कहिलेकाँही बस टिप्पणी र टिप्पणी बिना बस सुनेर उनीहरूलाई चाहिने मात्र हुन सक्छ जब उनीहरू सहयोगी उपचार प्राप्त गरिरहेका छन्। तपाईं उनीहरूलाई लागी तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ र ती सबै मार्फत तिनीहरूसँग टाँसिनेछ।
एक महान श्रोता हुनुहोस्
तिनीहरूलाई सकेसम्म सकारात्मक सुदृढीकरण दिनुहोस्
उनीहरूको जीवनमा तनाव कम गर्न मद्दत गर्नुहोस्
उनीहरूको उपचार योजनाहरूको साथ रहनको लागि प्रोत्साहित गर्दै
उनीहरूको उपचार सत्रहरूको बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस् (यदि तिनीहरू इच्छुक छन्)
उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ लामो यात्राको लागि।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, याद गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रियजनको चिन्ता तिनीहरूको गल्ती होइन। यदि उनीहरूले तुरून्तै यसलाई "ठीक" गर्न सक्दछन् भने, तिनीहरू सायद त्यसो गर्दछन्। साथै, बाटोको हिसाबले आफूलाई हेरचाह गर्नुहोस् तपाईं जलाउनु हुँदैन।
राम्रो समाचार यो हो कि त्यहाँ सही शायद औषधी र उपचार दृष्टिकोणको साथ कतै नै छिटो र सरल "उपचार" नभए पनि, चिन्ता प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र अक्सर नाटकीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ।
यो जानकारी धेरै स्रोतहरूबाट पुनःप्राप्ति गरिएको छ कसरी चिन्ता प्रबन्ध गर्न संसाधनहरू सम्बन्धी स्रोतहरू, ध्यान विकासका लागि कुञ्जीहरू, अमेरिकाको चिन्ता र डिप्रेशन एसोसिएसन, र हेल्थलाइन।